राजेश मिश्र प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली अमेरिका आईपुगे। उनले संयुक्त राष्ट्र संघको बार्षिक ज्याम्बोरीमा अंग्रेजी बोल्नेछन। नेपालमा आयोजित चौथो बिम्स्टेकको शीर्ष सम्मेलनमा ओलीको अंग्रेजीको चर्चा भयो। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले लेखिदिएको भाषणको ...
फ्रान्सेस्को फोन्टम्यागी पच्चीस वर्षअघि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको अघिल्तिर ह्वाइट हाउसको बगैंचामा प्यालेस्टिनी नेता यासेर अराफात र इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक राबिनले एकअर्कासँग हात मिलाएर एक नयाँ अध्यायको शुरुआत गर्नुभएको थियो । ...
मानव बेचबिखन विरुद्धको बाह्रौं राष्ट्रिय दिबस सरोकारवालाहरुले आज बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन् । केही बर्षयता महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा क्रियाशील रहेकाले यसबारे केही जानकारी र अनुभव सेयर गर्न ...
गत श्रावण २१ गते ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको भक्तपुरमा अपहरणपछि हत्या भयो। हत्यामा संलग्न अभियुक्तहरु सिन्धुपाल्चोकका अजय तामाङ र नुवाकोटका गोपाल तामाङ प्रहरीसंगको मुठभेडमा मारिएका छन्। यो घटनाले नेपाली समाजमा ...
राजेश मिश्र गुणराज लुईंटेल हृदयबाटै खराब मान्छे होईन। तर मगजले हृदयमा ठोकेपछि मान्छे बहुलाउँछ। गुणराजको मगजमा अभिमानको मुङ्ग्रो बजारिएछ यो पटक। नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) फ़ुट्नैपर्ने संस्था हुँदै होईन। तर गुणराजले ...
लोकमान चोर भए हाम्रा ‘नेता’ के?
नेपालको निजामति सेवामा हुकुम प्रमांगीको बलमा सोझै अधिकृत स्तरमा जागीर खाने न भूतो न भविष्यति यीनै हुन्, लोकमान सिंह कार्की। उनका बाबु पंचायतकालमा शक्तिशाली थिए। उनको पहुँच दरवारमा सम्म थियो। लरतरो ...
ग्रहणकालीन गुरुपुर्णिमा: मेरो मन्थन
राजेश मिश्र गुरु पूर्णीमाको मौकामा चन्द्र ग्रहण लागेको छ। त्यो पनि रातो। म अहिले बसेको विश्वको पश्चिमी भूभागमा मान्छेहरु केवल बैज्ञानिक रुपले मात्र सोच्छन भन्ने भ्रम मेरा धेरै नेपाली पाठकहरुलाई हुनसक्छ। ...
राजेश मिश्र भूईंबाट माथि उफ़्रिएको कुनैपनि बस्तु कालान्तरमा भूईंमै बजारिनेछ। कुनै बस्तुसंग धेरैबेर खिचखिच गर्योभने त्यो बस्तु निश्चित रुपले भाँचिने छ। यी र यस्ता धेरै उखान टुक्काहरु संसारभरी "मर्फ़ीज ल" अथवा मर्फीको ...
राजेश मिश्र ०४६ साल अघि तत्कालीन राजाहरुको सकृय नेतृत्वमा आधारित पंचायती व्यवस्थामा पंच नेताहरुलाई दुई तिहाई बहुमतको दरकार नै थिएन। त्यतिबेलाको बहुमत लाठी-मुंग्री अनि जेल-नेलबाट निर्धारित हुन्थ्यो। तैपनि, पंचायती तानाशाही ढल्यो। त्यो ...
राजेश मिश्र कुराको आरम्भ एउटा जातक कथाबाट गरौँ। एउटा बिच्छी ब्याकूल थियो। जन्मजात दंशी उसलाई बर्षाको भेलले नदीको बहावमा आएको तीब्रताले चिन्तित तुल्याएको थियो। बिच्छीहरु पौडिन जान्दैनन्। तर डस्नु उनीहरुको मौलिक अनि ...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सन् २०१६ को निर्वाचन अभियानको एउटा बहुचर्चित तर विवादास्पद एजेण्डा थियो– मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल । उहाँले आफ्ना हरेक सम्बोधनमा भन्नुहुन्थ्यो, मेक्सिकोको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउँछु तर त्यसको ...
राजेश मिश्र हुने बिरुवाको चिल्लो पात! हाम्रो नेपाली समाजको प्रचलित उखान हो यो। साथीहरुलाई मेरो कुरा निहुँखोजा लागे क्षमाप्रार्थी छु। तर मलाई छाती ठोकेर भन्न कुनै संकोच छैन, नेपाल अमेरिका जर्नलिष्ट एसोशिएशन, ...
सन् २०२२ विश्व कपमा धेरै नेपाली रुनेछन्
राजेश मिश्र नेपालमा मेरा दौंतरीहरु अहिले विश्व कप फुटबलको आनन्दमा मग्न छन्। घुम्दै गरेको पृथ्वीमा त्यहाँ खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदा रातको समय पर्दो रहेछ। यो भूगोलको पश्चिमी गोलार्द्द्को अस्थायी बासिन्दाको रुपमा यो ...